indawo yoxolo yeVexin paranthesis - I-Airbnb
indawo yoxolo yeVexin paranthesis
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPauline
Iikhilomitha ezingama-60 ukusuka eParis, kumda we-Île de France kunye nemimandla yaseNormandy, siyakwamkela ukuba uhlale uphumle entliziyweni yendalo. Unokuyonwabela indawo yendalo kwaye, kwimozulu entle, uphucule ukuhlala kwakho ngokuqubha kwindawo yokuqubha.
Ukuhlamba ekukhanyeni kwaye uvule egadini, i-cottage iya kukuvumela ukuba uxabise umtsalane wezakhiwo zakudala (iiplanga, amatye abonakalisiweyo) ngelixa unenduduzo yanamhlanje.
Utshintsho lwendawo luqinisekisiwe!
Yenziwe ngamagumbi okulala ama-2, elinye lawo liphantse libe yi-50 m2, i-gîte izuza ngaphezu kwayo yonke indawo kwigumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi elivulekileyo kunye negumbi lokuphumla elilungelelaniswe malunga nesitovu.
Uya kukwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kwigadi ephantse ibe yi-1.5 yeehektare esicebisa ukuba wabelane ngazo. Izilwanyana nazo zikhona kwipropati.
Kuyafana nakwiqula lokuqubha oya kulisebenzisa simahla (phakathi kwe-15 kaMeyi kunye ne-30 kaSeptemba) ngokufanayo nathi.
4.90 · Izimvo eziyi-103
Uya kunandipha wayehambahamba ngeenxa eehambo yenkcubeko (Gisors nqaba kms 12 / Villarceaux estate 17 kms / izitiya Claude Monet e Giverny 30 kms / Roche Guyon nqaba 26 kms ...) okanye lokuphola usapho (Aventurland 9 kms / Herouval park 8 kms / St Paul park 34 kms ...).
Umbuki zindwendwe ngu- Pauline
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hadancourt-le-Haut-Clocher